Xadhigjiidka Xikmadbaa ka Dahsoon (2) Dr.Elmi M.Nur‏ « SAWNEWS NETWORK
« Siilaanyo iyo Faysal Haday Ku HeshiiYeen Duminta Somaliland Shacabkiina Waa Ka Tashadey
Masuuliyiinta UCID oo Wali Xidhan iyo Jawiga Saaka ee Magaalada Borama »
Xadhigjiidka Xikmadbaa ka Dahsoon (2) Dr.Elmi M.Nur‏
Posted by Sawnews.tk on August 19, 2009
Marka hore waxaa xusid mudan, iney tahey tallaabo dhinaca habboon loo qaadey arrimaha ku soo kordhey isbeddellada saaxada siyaasadda Somaliland; baaqa madaxweynaha ee ku wajahan gogosha wada tashiga ah ee uu u fidiyey axsaabta mucaaradka, iyo go’aanka guurtida iney safkooda qaybsamey mideeyaan ummadana u dhex noqdaan. Waxaana bogaadin mudan dadaalka bulshada rayidka ee ku wajahan xal u helidda xadhigjiidkan ka dhex aloosmey xukuumadda iyo axsaabta. Qoraalkii hore waxaan kaga hadalney GDQ iyo xaaladda dhibta leh ee ka dhalatey diiwaangelintii ay agaasinkeeda lahaayeen. Maaliyadda iyo wakhtiga ku lumey diiwaangelinta waxaa ka badan jahawareeryada siyaasadeed een wali xalkoodu muuqan. Inkastoon fashilka ugu weyn ay xambaarayaan guddiga u xilsaarnaa fulinteeda haddana eeddeeda kama madhna golayaasha qaranka ee wakhtigooda ku lumiya buuq iyo sawaxan aan xalka qaddiyadda waxba ka tareyn ammaba inta badan qaata go’aanno ugasii daraya.
Golaha wakiillada oo ah hay’ad si dimoqraadi ah loo soo doortey oo beddeshey barlamaankii ka horreeyey oo lagu dhalliili jirey iney ahaayeen kuwo karti ahaan liita oo ku sifoobey dheemaal raac, haddana rajadii laga qabey iney isbeddel muuqda la yimaaddaan wuxuu u egyahay mid lagu hungoobey. Tan iyo intii la doortey wuxuu ka dhammaan laa’yahey golahani xadhigjiid, dhoolatus kooxeysi iyo go’aanno laga soo saaro arrimo fulin iyo farsamo farci ah ku qotoma, kuwaas oo badanaa baal marsan hadafkii iyo hawshi gole sharci dajineed laga sugayey. Dhinac marka laga eego goluhu awoodihii uu lahaa ayaad mooddaa inuu si ku talo gal ah uga gaabiyey, sida dhammeystirka xeerarkii loo baahnaa ee dalka lagu hagi lahaa oo khasabtey in xeer jajab wax lagu maareeyo, wuxuu ka gaabiyey la xisaabtanka hay’adaha dawladda, hubinta kartida guddiyada qaranka sida GDQ, iwm. Dhinaca kalena wuxuu ahamiyad aysan muteysan siiyey qaddiyado kaba baxsan masuuliyaddiisii loo igmadey, sida; shakhsi ajnabi ah oo la eryey, diiwaangelin la dhalliiley, xaddiddaada xilliga doorashada, etc. Arrimahani waxey keeneen in hawl maalmeedkii barlamaanku uu ku milmo ajandayaashii axsaabta siyaasadda. Wali in badan oo xildhibaannada ah waxaa iskaga laaqan iney kala fahmaan doorashada oo xilligeedii lagu qabto iyo diiwaangelin midka muhiimsan. Waxaa iskaga qasan sideedaba diiwaangelinta mabda’ahaan iyo in natiijadan mugdiga badani ku lammaan yahey loo isticmaalo doorashada hadda ee madaxweynaha. In dadka dhalsho la siiyo oo la diiwaan geliyo waa mabda’ qaran oo distoori ah, hase ahaatee in natiijada soo baxdey lagu galo, waa arrin fulin iyo farsamo oo go’aankeeda ay leeyihiin hay’adaha fulintu. Wakiilladu waxey xaq u leeyihiin iney la xisaabtamaan komishanka. Waxaa iyana layaab leh in qaarkood shakhsi ajnabi ah oo dalkan marti u ahi kala weyn yahey hay’daha qaranka. Haddii farsamo ahaan la caddeeyey iney qaldan tahey, maxaa diidaya in la saxo doorashooyinka dambena loo adeegsado. Wakiilladu waxey iska indha tirayaan iney u simanyihiin shacabka inta magacooda iska weydey diiwaan gelinta ee ka xarrimmaya iney wax doortaan iyo kuwa qofkiiba soddonka qof ku footeyn karo. Qaladka midka muuqda ee la taaban karo ayaa la saxaa ee ma yaallo wax la iskugu xiijiyo mid aan dhicin oo mala awaal ah- musharaxbaa doorashada ku shuban doona!
Golaha guurtidu oo ah golaha ammaba aheyd hay’adda ugu sarreysa xeerarka dalka, waxaad mooddaa inuu sii luminayo maamuustkii, haybaddii iyo miisaankii uu lahaanjirey, duruufaha haysta darteed. Wuxuu golahani u baahanyahey inuu dib isu saxo. Sida Golaha Wakiillada wuxuu dhexgaley arrimo fulineed isla markaana ku guul darreystey, sida, muddo kordhin is daba joog ah, xaddidda doorashada iyo dacwado madani ah oo uu beel ka simey. Golaha guurtidu waa gole dhaqan oo distoori ah, ay tahey inuu ka shaqeeyo daminta khilaafaadka, nabadeynta beelaha, ilaalinta wadajirka ummadda, hase ahaatee qaabkii uu u maamuley qaddiyadda Ceelbardaale iyo natiijadii ka dhalatey, waa mid dhaawacdey haybaddii golaha khatarna u horseeddey jiritaankii qarankan haddaan si xikmad leh oo caddaalad ah xal looga gaadhin.
Axsaabta qaranku waxey astaan u yihiin nidaam xaddaari ah oo looga gudbey qaabkii beelaha ku saleysnaa. Marka si hufan loo adeegsado waa nidaamka ugu habboon ee ummaddu ku soo saarto hoggaanka dalkeeda. Waana hawlbawlaha ummad kasta oo isbeddel doon ahi ka hinqan karto. Taasi waajibaad weyn ayey saareysaa masuuliyiinta asxaabta qaranka iney ummaddan oomman ee qarankan cusub tusaan quwaddeeda iyo kartideeda iyo himiladeedu halkey ku jirto oo ay u xulaan heerkasta oo ay ahaataba dadkeeda hoggaamin kara ee horumar gaadhsiin kara. Kuwaas oo ay lagama maarmaan tahey iney ku sifoobaan hufnaan, daacad, karti, aqoon iyo dhabar adeyg ay xilliyadan adag ummaddan ku sabata bixin karaan. Laakiin waa nasiib darro weyn, haddii ay siyaasadda ka raadiyaan meel xaqiran; caadifada dhalanteed ah, mareegta qabiilka ammaba kala saari waayaan ilaalinta qaranka iyo qaladaad cid gaar ahi fashey oo haddii xilkasnimo lala yimaaddo xilligeeda la sixi karo. Baratanaka siyaasadda haddii uu ka hor yimaaddo si toos ah ammaba si dadban, nabadda, sumcadda, wadajirka iyo jiritaanka qaranimo waa ruux geedkuu korayo ammaba saaran yahey guntiisa jaraaya.
Maansadan gaaban waxey ishaareysaa jaanib ka mida muuqaallada guud ee golayaasha iyo axsaabta dalku yeelan karaan ammaba wajiyada moronka badan ee ay qaateen waayadan danbe. Garashada ay maansadu u yeedheysaa waxey u taagan tahey xikmadda iyo caqliga toosan taas oo ruux walliba nasiibkiisa leeyahey, loona baahan yahey inuu gaarkiis isu gar naqo. Garashadu waxey u taagan tahey waxgaradka ummadda sida inta maskax fayow, gole kasta oo ay ku jiraan gaar ahaanna culimada, aqoonyahanka, ururrada bulshada dhallinyarada, salaaddiinta, haweenka etc.Waxeyna fareysaa iney u guntadaan xallinta hawlahani murugsan, jidna u bixiyaan ummaddu ku higsato himiladeeda iyo aayaheeda. Waxeyna fogeyneysaa dhaqanka guuldarrada ee ma aha mid ashkhaas ku wajahan. Waxeyna fogeyneysaa dhaqanka guuldarrada ee ma aha mid ashkhaas ku wajahan. Wixii halqabsi ah amma dhalliil kasoo baxa looma qasdiyin ee hallaga raalli ahaado.
Maantaan Garashoy ku Tabey: Garsoor iyo Gogol Nabadeed
Adaan garashoy ku tabey
Gees teebaad naga jirtaa
Galbahan marti kaaga nahey
Ninbaa geed fuulayoo
Intuu geesinomo is bidey
Inuu gaadho baarka raba
Dushiyo guudka uga baxo
Hayeeshee waxaanan garan
Waxaan isu kay galayn
Gedduu arrinkaa ku hanan
Gudimo daabluu sitaa
Geedkuu wali saaran yahey
Guntiyo jirriddaba ku jari
Inuu gommadaha is goyn
Ammaa geedkuba la dhici
Lug iyo garabkaba ka jabi
Qudhiisa galaafan karo
Miyuu shaki soo galaa
Maantaan garashoy ku tabey
Aan guurno markaan is nidhi
Kuwii geediga horkacay
Reerkoon gaadiid laheyn
Habeen gallinkiisa dhexe
Gudcur aan dayaxna jirin
Inay geeddiga raraan
Go’aansadey talada gudhan
Waxey ku fureen go’doon
Garbooyin dumaaya iyo
Goob aan bani aadam degin
Waxaan geesiyaal mitida
Duqey guurtiya laheyn
Xeer iyo gogol bilan laheyn
Waxaan gacal iyo xigaal
Gobnimo dhaqanka u laheyn
Gegay kaga soo hadheen
Darbaa golayaashii degey
Dumaal iyo garab ku yimid
Waxaa guddi loo boqradey
Dhabtii duul lagu gablamey
Qaar aan garanayn xilkood
Waxaaney gudan kareyn
Kursiga u gariirayoo
Malaha gaajada ku reeb
Dantoodu ka gudubsaneyn
Waxey kala gocanayaan
Salkeeda ma gaadhi karo
Ayaankasta waa gadood
Gurxan iyo qaylo dhaan
Galaayuus aan dameyn
Iyagaa isu gaydhanoo
Garbaha isu laalanooy
U baahan in la kala guraa
Tabcey isla gaadayaan
Khiyaamiyo guul darrey
Intaa is la goobayaan
Lagaadh dabinkiyo suryada
Goor tuu daganyahey ku qabo
Ka soo gura waxaad gubtaan
Ku giiji halhays ah bay
Intaa isu gooddiyaan
Wixii gutin shaley la xidhey
Maantey kala goynayaan
Siduu Gaarriye u yidhi
Giraangir wareegsan iyo
Godbey ku dul meerayaan
Waxaan gaadh culus laheyn
Gaashaan bira aan laheyn
Waxaan gobannimiyo sharaf
Go’aankiyo talada qaran
Xornimo gaara u laheyn
Sidii gabadh ugub ahoo
Gaayaankeedii u yimid
Guddooon baa lagu baxshaa
Waliba galbis loogu daro
Qaarbay ganacsiba u tahey
Badeecad la goosan karo
Suuqyada gaddisleyda furan
La geyn karo sayladaha
Ninkii rabi gadani karo
Waxaan gacan kuugu jirin
Haddaad gaawaha u culan
Waxaad geyin baad heshaa
Harraadkuna kaama go’o
Waxey garan laa’yihiin
Rabbaa galladaha baxshee
Gayigan innagaa iska leh
Guntiisana baadhi kara
Guudkiisana beeri kara
Gu’yaal hore kii jiriyo
Kuwani ka dul goohayiyo
Gadaal kuwa imanayaba
Khayrkiisay guran karaan
Haddii badh giriifayiyo
Badhkii wax ka giigayaba
Gartood innigaa u nool
Gafkoodana maydhi kara
Dhabtii garashoy ku tabey
Adoo Guullaha cuskani
Garsoor hufan baan rabaa
Inaad geed damal hadhweyn
Inaad googol noo dhigtaa
Xikmadi godlataan rabaa
Mar uun bal garwaaqsadaan
Dantiyo qaranimada guud
Dhaafaan maankani gurracan
Dhibaatadan laga gudbaa
Wallee garashoy ku tabey
Taariikh aan laga gafeyn
Garaad togan baan rabaa
Gaddii lagu rayn lahaa
Heshiis lagu gaadhi laa.
Inaad nagu garab gashaa
Ducana ku gunaanaddaa
Dr.Elmi M. Nur
This entry was posted on August 19, 2009 at 10:31 pm	and is filed under Articals. Tagged: Articals, Somaliland. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.